Massimiliano Allegri oo isku diyaarinaya qabashada macallinnimo ee Man United… (Waa kee halyeyga kooxdaas ee uu dib ugu soo celin doono Old Trafford?) – Gool FM
(Manchester) 15 Okt 2019. Tababare Massimiliano Allegri ayaa la soo warinayaa inuu Patrice Evra ku darsadatay shaqaalaha kala howlgali doona garoonka Old Trafford haddii uu noqdo macallinka xiga ee kooxda Manchester United.
Evra ayaa soo metelay kooxda Red Devils intii u dhaxaysay 2006 illaa 2014 waxaana uu kula guuleystay Champions League iyo shan koobka horyaalka Premier League ah.
Allegri ayaa loo arkaa inuu yahay ninka xiga ee qabanaya shaqada Man United kaddib qaabka xun oo uu ku bilaabay xilli ciyaareedkan 2019-20 macallin Ole Gunnar Solskjaer, iyadoo Man United ay labo dhibcood ka sarreyso booska loogu laabto heerka labaad, kaddib siddeed kulan oo Premier League ah.
Sida uu warinayo Wargeyska Daily Mail, macallinkii hore ee Juventus ayaa u balanqaaday Evra inuu ka mid noqonayo shaqaalaha tababarka haddii uu mustaqbalka noqdo macallinka Man United.
Evra ayaa u dhaqaaqay Turin sanadkii 2014-kii isla xagaagii uu Allegri ku soo biiray, wuxuuna u saftay 82 kulan kooxda ka dheesha horyaalka Serie A.
Ninkan reer France oo ciyaarista kubadda cagta ka fariistay xagaagii ayaa had iyo jeer ka hadlayey rabitaankiisa ah inuu ka mid noqdo waaxda maamulka ee kooxda Manchester United.
“Ma aqriyo wargeysyada Spain” – Eden Hazard